Sivy taona lasa : Voaheloka Ravalo
01/08/2018 admintriatra 0
Ny sabotsy 28 aogositra 2009 tokony ho tamin’ny 1 hatramin’ny 6 ora maraina no nivoaka ny didim-pitsarana nanameloka an’i Marc Ravalomanana hanao asa an-terivozona mandra-pahafatiny araka ny baiko nomen’i Andry Rajoelina ny minisitry ny Fitsarana …Tohiny
Somaroho 2018 : Nandresy ny ASCUT
Nangotraka ny fihaonana. Niditra tamin’ny andro fahatelo ny fifanintsanana isam-bondrona amin’ny fiadiana ny « Basikety Somaroho 2018 ». Fifaninanana iraisam-pirenena eo amin’ny sokajy N1A lehilahy, tanterahina amin’izao fotoana izao ao amin’ny kianja mitafon’i Nosy-Be. Teo …Tohiny
Talatamaty : Eny Tsiafahy ireo mpanafika Sinoa
Natolotra ny fampanoavana omaly ireo efa-dahy voatondro ho nanao fanafihana nitam-piadiana nahalasibatra teratany Sinoa teny Maibahoaka Talatamaty. Taorian’ny fihainoana azy ireo dia samy notanana am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy avokoa izy ireo. Raha tsiahivina dia andian-jiolahy …Tohiny
Madagasikara : Nihatsara ny harinkarena
Nahitana fihatsarany ny fitombon’ny harinkarena faobe teto Madagasikara tato anatin’ny 5 taona, araka ny tatitry ny Banky iraisam-pirenena. Tafakatra 4,2 isan-jato izany ny taona 2017 raha toa ka 5 isan-jato ho an’ny taona 2018, raha …Tohiny
Vola mitentina 4 Miliara Ariary no maha voarohirohy an’i Mamy Ravatomanga amin’ity raharaha ity. Vola nolazainy fa hofana milina nampiasain’ny Jirama teo anelanelan’ny taona 2010 – 2011. Tompon’andraikitra ambony tao amin’ny Jirama ny tenany tamin’izany. ...Tohiny